Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » eTurboNews bụ aha jọgburu onwe ya maka ika ika: Nke a bụ ihe kpatara ya
Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Ahuta • LGBTQ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Mmekọrịta • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Mmanya & mmuo • WTN
eTurboNews bụ aha jọgburu onwe ya maka ika ika. Akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ akụkọ zuru ụwa ọnụ nke na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ njem, ụdị ndụ na ikike mmadụ pụrụ iche wee malite na Indonesia.
Na 1999-2001, DMC Bloody Good Stuff n'okpuru nduzi nke Juergen Steinmetz na Melanie Webster nọchitere anya njem nlegharị anya Indonesia na United States na Canada.
A haziri nke a ọnụ na onye bụbu minista omenala na njem nlegharị anya Indonesia, tọ nwụrụ Hon. Ardika si Bali.
Otu n’ime ihe ịma aka ndị e nwere n’oge ahụ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma kpataara ịdọ aka ná ntị United States aka ná ntị megide Republic of Indonesia.
N'afọ 2000, n'ememme njem nlegharị anya TIME na Jakarta, Onye isi ala Indonesia nyere Juergen Steinmetz nrite maka mmezu pụrụ iche maka njem nlegharị anya Indonesian na emume nnukwu mmadụ na Plaza Indonesia.
N'oge ahụ ndị ọrụ ọha na-atụkwasịghị ụlọ ọrụ nkeonwe, ụlọ ọrụ nkeonwe atụkwasịghịkwa gọọmentị obi. Ihe dị mma nke ọbara malitere ndị Indonesian Council of Tourism Partners iji mee ka ụlọ ọrụ ahụ gbakọta ọnụ.
ICTP na-achọ ụzọ dị ọnụ ahịa iji gwa ụlọ ọrụ njem US iji kuziere ngalaba ahụ gbasara mpaghara Indonesia. Nke a dị mkpa iji nweta ozi ahụ na nsogbu ndị dị na Jakarta adịghị emetụta njem nlegharị anya na Bali dịka ọmụmaatụ.
Ịntanetị dị na nwata, ma ọtụtụ ndị njem na-enwebu ozi ịntanetị, ụfọdụ nwere weebụsaịtị.
Juergen Steinmetz jikọtara ya na eTurbo Hotels dị na Singapore dị ka onye nkwado wee malite akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ njem mba ụwa mbụ site na iji usoro Yahoo Group. Akpọrọ ya eTurboNews, na-amata onye nkwado.
eTurboHotels bụ ụlọ ọrụ ụdị Expedia mbụ. Ha nwere ọtụtụ ngalaba webụsaịtị dị ka sheraton.id ma ọ bụ hilton.id ma nyefee ha ka ha wuo webụsaịtị efu maka ụlọ ọrụ njem Indonesian. Ụdị ego ego bụ ịkwụ ụgwọ ọrụ maka ntinye akwụkwọ n'ịntanetị.
Site n'enyemaka nke ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya Indonesian, nke a eTurboNews Yahoo Group tolitere ngwa ngwa.
Otu ndị ọzọ, dị ka otu ASEAN Tourism Discussion Group na-enwe mmetụta, kpọkọtara ndị isi na mpaghara nzuzo na nke ọha sitere na mba ASEAN ọnụ iji kparịta imekọ ihe ọnụ njem nlegharị anya. Ọtụtụ n'ime ndokwa dị ugbu a na njem nlegharị anya ASEAN malitere na mkparịta ụka a.
Òtù Na-ekwu okwu Hawaii ghọrọ ohere na-enweghị mgbasa ozi maka ndị njem njem iji soro ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ndị ọzọ na-ebubata na Hawaii kparịta ụka na mgbanwe echiche, otuto, na nkatọ. N'afọ 2002 eTurboNews, gwara ya Ndị njem nleta Hawaii (HTA) na ebe a na-akparịta ụka n'Intanet enwechaghị ihe ga-eme n'ọdịnihu, ha agaghịkwa eche echiche ịkwado mkparịta ụka dị otú ahụ.
Ma ugbu a, eTurboNews malitere ọtụtụ blọọgụ ewu ewu gụnyere Nzukọ, ụgbọ elu, mmanya, GayTourism, TravelIndustryDeals, WorldTourismWire, na Akụkọ Hawaii.Online toro na ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi nke ya.
eTurboNews Mmekọrịta mụbara gburugburu ụwa, a pụkwara ịhụ akụkọ ndị e bipụtara na Hindustan Times na India n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
eTurboNews ghọrọ ngwá ọrụ ọhụrụ maka ozi njem na njem nlegharị anya nke na-eto ngwa ngwa na mpaghara ndị ọzọ nke ụwa. eTurboNews gbanwere usoro sitere na Yahoo Group gaa na ụdị email ndị ọzọ, nweere onwe ya site na Indonesia na 2001, wee malite mgbasa ozi ịntanetị nke mbụ zuru oke maka njem na njem nlegharị anya.
Afọ 22 ka e mesịrị, eTurboNews ka na-anọgide na-abụ ezigbo ihe.
eTurboNews bụ akwụkwọ akụkọ zuru ụwa ọnụ nke mbụ e bipụtara kwa elekere 24/7. Ọ bụ naanị waya akụkọ nwere onwe yana nke zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya nwere ọdịnaya nwere echiche nke mmadụ nwere ike ịhụ na eTN.
Site na ndị debanyere aha email ahia ahia 230,000+, nkesa ozi-e ugbu a bụ naanị 10% nke ndị na-agụ akwụkwọ n'ozuzu.
Ndị nchịkọta akụkọ gụnyere Google na Bing News, Breaking News, social media, na ngosi ngosi amụbawo visibiliti nke eTurboNews nke ukwuu n'ime afọ.
Otu afọ gara aga, isi ụlọ ọrụ Hawaii eTurboNews guzobe webụsaịtị 92 nọọrọ onwe ya nwere ọkwa nke ya yana SEO iji kwalite ọdịnaya n'asụsụ 92 n'ofe ụwa. Spanish, German, French, Chinese, Arabic, Hindi, Swahili, Portuguese, na Italian bụ ndị na-agba ọsọ ugbu a maka ndị na-abụghị Bekee.
Na ihe karịrị nde 2 pụrụ iche American ndị na-agụ akwụkwọ na-emeghe eTurboNews Edemede, United States bụ ndị kacha ege ntị, UK, Germany, India, na Canada sochiri ya.
Ugbu a, eTurboNews a na-ahụ na mba na ókèala 238. Mpaghara kacha nta dị na Antarctica nwere naanị otu onye na-agụ ya, amabeghị onye na-agụ akwụkwọ a.
Ndị kasị ibu obodo ebe eTurboNews Enwere ike ịchọta Frankfurt, Washington, London, New York, na Duesseldorf.
eTurboNews bụ onye ntọala nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa, na Njikọ Mba Nile nke Ndị Njem Nlegharị Anya, Na Network Njem Nleta Ụwa, ma guzobe onwe ya Tourtù Njem Nleta Hawaii na nzaghachi na mbụ Hawaii Talk Yahoo Group.
eTurboNews ka dabere na Honolulu, Hawaii, USA, yana ọrụ nọọrọ onwe ya na Duesseldorf, Germany, na ndị ode akwụkwọ nweere onwe ha na mba 128.
eTurboNews na-anọgide na-abụ onye ndu na-enweghị mgbagha na onye na-ebute ụzọ na mkpesa nke onwe maka njem njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, ibi ndụ na-emetụ, ejiji, ikike mmadụ na ọdịnaya ndị ọzọ na-atọ ụtọ.
Mgbe COVID-19 wakporo ụwa nke njem nlegharị anya, eTurboNews yana PATA, Nepal Tourism Board, na African Tourism Board tọrọ ntọala Iwughari. Trevel Otu na Machị 2020 n'akụkụ ihe ngosi azụmaahịa ITB kagburu na Berlin, Germany.
Otu a pụtara na Network Njem Nleta Ụwa ya na ndị otu nọ ugbu a na mba 128.
Mgbe mkparịta ụka mbugharị 257 ama ama, eTurboNews na World Tourism Network jisiri ike mee ka ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya na ndị isi ya dị n'otu na itinye aka.
na Livestream, eTurboNews malitere ya mbụ 24/7 zuru ụwa ọnụ video ozi ọwa, na Ihe ngosi akụkọ na-agbasa, na eTV. Ndị na-agụ akwụkwọ nwere ike ịhụ vidiyo eTN na mkparịta ụka ozugbo na-egwu ihe niile eTurboNews webụsaịtị, ndị mmekọ syndication, na ọtụtụ nyiwe.
A na-emeju nke a na oke eTN Podcast nhọrọ. Akụkọ ọhụrụ ọ bụla na eTurboNews enwere ike ịgụ ugbu a, gee ntị dị ka pọdkastị, ma lelee dị ka vidiyo na ya Ọwa YouTube eTN ma oebe a maara nyiwe.
Obodo na ókèala ebe eTurboNews a na-ahụ:
South Africa: 54,047
South Korea: 10,887
Mba Israel: 9,282
Sri Lanka: 7,168
Obodo Austria: 6,284
New Zealand: 5,490
Trinidad na Tobago: 4,196
Dominican Republic: 1,734
Ugwu North Macedonia: 1,660
Costa Rica: 1,631
Ndị Maldives: 1,364
St. Lucia: 1,160
Bosnia na Herzogovina: 1,145
Iceland: afọ 1,061
Antigua & Barbuda: 1,023
St. Kitts & Nevis: 688
Agwaetiti Cayman: 659
Ọnwa Montenegro: 633
Agwaetiti Solomon: 477
Ụlọ akwụkwọ sekọndrị: 434
South Sudan: 396
Vincent & Grenadines: 366
Sierra Leone: 337
El Salvador: 302
Ndị Turkey & Caicos : 276
Ndị agha: 208
Aha njirimara: 208
British Virgin Islands : 196
Cape Verde: 134
St Martin: 91
Agwaetiti Mariana: 57
Agwaetiti Faroe: 48
Agwaetiti Cook: 30
Isle nke mmadụ: 16
Agwaetiti Marshall: 16
Agwaetiti Falkland: 11
Agwaetiti Aland: 5
Mpaghara oke osimiri India nke Britain: 3
Svalbard & Jan Mayen: 3
Agwaetiti Norfolk: 2
Obodo kacha ebe eTurboNews a na-ahụ:
Newcastle dị n'elu Tyne: 19,326
Atlanta, GA: 18,654
Portland, OR: 12,923
Obodo Quezon: 11,126
Indianopolis, N'ime: 10,202
Obodo Cape: 10,131
Obodo Kansas, MO: 8,848
Udochi, MO 7,024
Ndị ọrụ ụgbọ ala: 6,854
Obodo Salt Lake, UT: 6,682
Obodo Cebu: 5,633
Obodo Oklahoma, OK: 4,830
Kwesịrị ekwesị, TX: 4,518
Irvine, CA: 3,474
Osimiri Ewa, HI 2,914
Obodo Ho Chi Minh: 2,869
Myrtle osimiri: 2,857
Ndewo, HI: 2,852
Saint Michael: 2,819
Mkpụrụ vaịn: 2,747
Nkume nta, AR: 2,483
Ebe Bloom: 2,389
Ọnụ ọgụgụ: 2,259
Ọdịda Sioux: 2,216
Eugene, OR: 2,098
Obodo Jersey, NJ: 2,065
Ndị agha: 1,868
Ugwu mmiri: 1,832
Mmiri Saratoga: 1,725
Ugwu Ugwu: 1,705
Saint Paul: 1,668
Obodo Mexico: 1,661
Ọdụ mmiri Montego: 1,632
Ọnụ ọgụgụ: 1,592
Ndi Indonesia: 1,581
Ọnụ ọgụgụ: 1,567
Ọnụ ọgụgụ: 1,542
Ụlọ akwụkwọ kọleji: 1,519
eTurboNews bụ akụkụ nke NewsNews Group. Ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ na iru eTurboNews nwere ike na Travelnewsgroup.com/reach.